မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်
စိတ်ပူပန်မှု - လူတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ပူပန်ကြောင့်ကျဖြစ်ရတဲ့အခါ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်.. . စိုးရိမ်စိတ်ကြီးမားသူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ အမြဲပူပင်နေတတ်ကြတယ် . . . စိတ်ပူပင်တယ်ဆို...
လှလွန်းသူရဲ့ အငြိုး - တခါတုန်းက ကောသမ္ဗီပြည်ရဲ့ ရွာငယ်တခုမှာ ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာဆရာ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဇနီးမောင်နှံမှာ အင်မတန်ချောမောလှပတဲ့ သမီးကညာ တဦးလည်း ရှိပါသတ...
နောင်တမရစေနဲ့... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd - ဒယ်အိုး ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ... နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်း... နောင်တမရစေနဲ့... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
တံငါသည်၏ အလိုရှိတိုင်း ပြုနိုင်သည့် အဖြစ်သို့ ... - ဗဠိသသုတ် - (ငါးမျှားချိတ်) သာဝတ္ထိနိဒါန်း... ရဟန်းတို့ လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ခက်ထန်၏၊ ထက်မြက်၏၊ ကြမ်းတမ်း၏၊ အတုမရှိသော ယောဂ၏ ကုန်ရာ အရဟတ္တဖိုလ်ကိ...
… ဆိုတာ - ၀ဋ်ဆိုတာ အင်း.. အရင်ဘ၀ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ နေလို့မရအောင် လုပ်ခဲ့ဖူးသလားမသိ။ နေ၀င်မီးဖြတ်လုပ်ခဲ့ဖူးသလားမသိ။ အကောက...
De lo lo ho lo lo - ဟိုနေ့က ဟိုကိုသွားတာ တစ်နာရီကျော်ကြာပါတယ်။ ဟိုကနေ ဒီကိုသွားတာ နစ်နာရီကြာပါတယ။် ဒီကနေ အိမ်ကိုပြန်တာ တစ်နာရီကျော်ကြာပါတယ။် စုစုပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ မှောက်သွာ...
July 22 မှာ နေကြတ်မယ်တဲ့ ဆူနာမီ ကောလဟလ သတိပြု - http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
ကယ်တင်ရှင်မရှိပါ - ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ဗမာပြည်ကနေ ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက် ပြည်ပက မီဒီ ယာတွေ အကြားမှာ ဒီခရီး စဉ်ဟာ အောင်မြင်သလား၊ မအောင်မြင်ဘူးလား ဆိုတာကို အတော်...
*ချမ်းသာရေးတရားတော် (သို့) သိကြားမင်းမေး၍ ဘုရားရှင်ဖြေသည်…* - မင်္ဂလာပါ ဓမ္မမောင်နှမတို့.. တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ.. တနေ့က (18.07.2009, SAT).. ကျွန်တော် *ဓမ္မရေစင်* http://www.dhammayaysin.com/ ဘလော့ ကနေ ဆရာတော် ဦးသုမဂ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အားကျဖွယ်၊ထူးခြားချက်များ - ကျနော့်ဆီမှာ ရန်ကုန်အရေးပိုင်ဟောင်း မောရစ်ကောလစ် ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ last & first in burma ကို ဦးခင်မောင်ကြီးက ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ နောက်ဆ...
အလင်းတစ်ခုသာရှိနေမယ် - ဆယ်စုနှစ် လေးခု-ကျော်ကျော်ဟာ လျင်မြန်စွာဖြတ်ကျော်နင်းသွားတဲ့ မြင်းတစ်ကောင်လိုပါပဲ..။ ခြေရာများစွာ ချန်ကာထားရစ် အသစ်အသစ်သောပုံရိပ်များစွာ ပြန်ကာစုစည်း ညည်း...
စက်ဘီးစီးခြင်း အက်ဆေး (၄) - မိတ္ထီလာကနေ လမ်းမှာ နားလိုက် မောင်းလိုက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ စီးလာတဲ့ ကုန်ကားကြီး မန္တလေးမြို့ကို ၀င်တော့ မနက်ခင်း ဝေလီဝေလင်း အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ နယ်မြို့လေးတစ...
သိကြားမင်းမေး၍ ဘုရားရှင်ဖြေသည်… - မြတ်စွာဘုရားရှင် မာဂဓတိုင်း ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၏ အရှေ့အရပ်၊ အမ္ဗသဏ္ဍအမည်ရှိသော ပုဏ္ဏားရွာ၏ မြောက်အရပ် ဝေဒိယကတောင် ဣန္ဒသာလဂူ၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်က ဖြစ်ပါ၏။ နတ်ပြည်ြေ...
ဖိုးစိန်ငကြွား - ဖိုးစိန်ဆိုတာ …. ကိုယ့်ကို ကိုယ်တင်စားတာနော်.. မွေးတုန်းက သကြားလုံးလေးလို….. နည်းနည်းကြီးလာတော့ သံပုရာသီးသာသာ…. အရွယ်ရောက်လာတော့ ရှောက်သီးကြီးကြီး အခုတေ...
Sambal Fish - အရင်ပို့စ်တုန်းက မနွေးကအစားအသောက်မပါလို့ စိတ်ဆိုးသွားပြီဆိုလို့ ဒီတစ်ခါလည်း အရသာရှိတဲ့ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်လောက် တင်ချင်ပါ့..။ ဒီရက်ပိုင်း ရာသီဥတုပူပြီး ခေါင်းေ...
အတ္တသင်ခန်းစာ - ထိုအမှားကြောင့် ကျွန်မအားတဖန်ပြန်၍ သတ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မနောက်တစ်ခါပြန်၍ သေ၀ံ့သည်။ အခန်း(၁) အိမ်ရှေ့၌ ချိတ်ထားသော နာရီက တစ်ချက်ချက် မြည်နေသည်။ ညပေါင်းများစွာ...
ငယ်ဘ၀ကို အမှတ်ရစေတဲ့ဟင်း - ကချင်ပြည်နယ် ဇာတိဖြစ်သူ ကျွန်မဟာ ကချင်ပြည်နယ်က အစားအစာတွေကို အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်...ကချင်ပြည်နယ်မှာမွေးပြီး၊အသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာ မေမေ့ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိမြေ အညာမြိ...
လိုတရ စိတ်ကို အသုံးချခြင်း ( ၄ ) - စိတ်ရဲ့ အင်မတန် ကျွမ်းကျင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ပညာတွေကို နားလည်လာလိမ့်မယ်။ သူ့ ကိုနားလည်လာပြီ ဆိုရင်တော့ သူ့ ကို အသုံးချတတ်ပြီပေါ့ ။ ယောင်္ကျားရှာစမ်း မိန်းမရှ...
မှတ်သားဖွယ်ရာစကားပဒေသာ(၇) - “နိဂြောဓ…. ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်ပြီး မူယာမာယာလည်း မများတက်သူ မည်သူမဆို ငါ့ဆီသို့ လာရောက်ပါစေ၊ ထိုသူတို့အား ငါဘုရား ညွှန်ကြားပြသချက်အတိ်ုင်...
ထိုအခါ.. - ကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ပြည့်စုံမှုတွေက ကာလအတန် ကြာတဲ့အခါ.. လေစီးကြောင်းတစ်ခုရဲ့ အေးမြတဲ့ သိပ်သည်းမှုတွေက အပူပိုင်းဇုန်အတွင်း ချဉ်းနင်းတဲ့အခါ..။ မိန်းမပျိ...
ဘက် - ညာဘက်မှာအချစ် ဘယ်ဘက်မှာအမုန်း ဘယ်ဘက်ကို ကိုယ်လုံးလုံးပါရမလဲ...? မိုးဖွဲတွေအောက်က ထီးလေးတစ်ချောင်းလောက်က မဖြောက်ဖျက်ပစ်ချင်စရာ အနစ်နာခံမှု ဟုတ်ပါ့မလား... ဒါေ...
၁၉ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၉ - အနိုင်မခံWilliam Ernest Henley ၏ Invictus(1875) ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်သည်။ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင်ဤအမှောင်အတွင်းမှနေ၍ အနိုင...
အာဇာနည်နေ့ ဒိုမမေ - ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အပါအဝင် နိုင်ငံရေးတွင် အလွန် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်ကြီး က...
သတင်းမှတ်စု ( ၂၈ ) - ဇွန်လ ၁၃ ရက် ရက်သတ္တပတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ မြန်မာသတင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်မည် နအဖစစ်အစိုးရ တောင်းဆိုထားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အ...
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် သူတို့နှစ်ယောက် -
အာဇာနည်နေ့မှသည်.... - Powered by Podbean.com ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘ၀က ဒီနေ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်၊ အာဇာနည်နေ့အခန်းအနားတွေမှာ နှစ်တိုင်းကျဆုံးကြရရှာတဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို အလေြး...
ကျေးဇူးတင်လွှာနှင့်စားစရာ - မင်္ဂလာပါရှင်~~~~ ဆုရဲ့ အသက် (၂၀)ပြည့် မွေးနေ့မှာ၊ဆု ကခင်ရတဲ့ ဆုကို ခင်မင်တဲ့ ဘလောဂါ မောင်နှမတွေက၊ ဆုကို မွေးနေ့ဆုတွေ လာတောင်းပေးကြတာ အရမ်းပဲ ၀မ်းသာပိတိ...
၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင် - ၁၉ ဇူလိုင်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာဆို ဒီအချိန် မိုးလေးတွေ တဖွဲဖွဲနဲ့ပေါ့။ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေတိုင်း မမေ့သင့်တဲ့ ရက်လေးပါ။ အာဇာ...
The Call for Ph.D Candidates - Dear All, May I share useful information for Master degree holders who would like to study Ph.D. (Biology, Physics, Pharmacology, Maths,Veterinary Sci...
အသုံးလုံး ပုံပြင် - ရှေးသရောအခါက ဗာလာဏသီပြည်တွင် မဟာဗာလာနံမင်း မင်းပြု၏ ။ ထိုမင်းတွင် ၀န်မင်း ၃၃ ပါးရှိသည်။ ထိုဝန်မင်းများထဲမှာ တစ်ပါးဖြစ်သောစက်မူ့ပါလ၀န်မင်းသည် တစ်နေ့သောအခါတိ...
နောက်ကျနေတဲ့ ကဗျာ - တကယ်ပါ ... ငါ့မှာ ၀င်ခင်းစရာ ဖျာလည်း မရှိဘူး စိတ်လည်း မကူးခဲ့ပါဘူး ... ။ တခါတရံလေးတွေမှာ လင်းလက်ခဲ့တာက လွဲရင် ငါက ... အမှောင်မှာ ကျင့်သားရနေတဲ့ လူစုန်းတစ်ေ...
သူတို့ပြောတဲ့ အောင်ဆန်း - ၂၀၀၄ ခုနှစ် မိုးရာသီ တစ်ရက်မှာ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုအတွက် " ပြည် " ကိုသွားပါတယ်။ အမှတ်မထင် နိုင်ငံခြားသား ၂ ယောက်လာမိတ်ဆက်တဲ့ အတွက် သူတို့နှင့် ခင်မင်ခွင့်ရခဲ...
Gay Marriage: What Would Buddha Do? - by James Shaheen, The Huffington Post, July 13, 2009 *San Francisco, USA* -- A lot of people ask me what the "Buddhist take" on gay marriage is. Well, it ...
ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၁၂) - ယခင်က ဘုရင့်နန်းတော်များကို သစ်နဲ့ တည်ဆောက်ကြတဲ့အတွက် ယခုအခါမှာ နန်းတော်အဆောက်အဦးများ မမြင်ရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းတော်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာတော့ သူတို့ကိုးကွ...
ချစ်သမီးငယ် (၂) - မိတ်ဆွေများအတွက် စာလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာ ကွယ်လွန်လေသူ ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင် ဖဒိုမန်းရှာရဲ့ သမီး ဖြစ်သူ ဇိုရာဖန်း ရေးသားတဲ့ ချစ်သမီးငယ် စာအုပ်အကြောင်း တင်ပြနေပါတယ်။...
သူငယ်ချင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ပြီနော်.... (၁) - ........အခုတလောလေ...ညလေးအရမ်းစိတ်တွေရှုပ်နေလို့ ဘလော့ကို မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး...အင်တာနက်လည်း သိပ်မတက်တော့ဘူး...စာတွေလည်း မရေးဖြစ်တော့ဘူး....အကိုအမတွေ အိမ်တွေလ...
ရွှေစည်းခုံဘုရား ပန္နက်ရိုတ် အုဋ္ဌ်မြစ်စီပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ -
Walter Cronkite (1916-2009) - Book Cover ဝျေါလျတာ ကရှနျးကိုကျကို မွနျမာတှတေော့ ရငျးနှီးလှမယျမထငျပါဘူး။ အမရေိကနျအတှကျတော့ ရာစုနှဈတဈခုစာလောကျ အလုပျလုပျခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျဂြာနယျလဈကွီး ဖွဈပါ...
လောကီနယ်ပယ်အောင်မြင်တိုးတက်ရန် - လူ့ဘဝ၏အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းသို့သွားရာလှေခါး(၃၀)ထစ် ၁။ ကတိအပေးနည်းပါစေ။ ၂။ အမှန်ကို အမြဲပြောပါ။ ၃။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထားရှိပါ။ ၄။ သူတစ်ပါး မကောင်းကြောင်း ဘယ်...
Leonardo da Vinci - LIFE လီယိုနာဒိုကို Florence မြို့အပိုင်၊ Vinci နယ်၊ Tuscan ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေး၌ ၁၄၅၂ ခု ဧပြီလ ၁၅ရက်နေ့၊ ညသုံးချက်တီးမှာ မွေးပါသည်။ အရပ်ဘက်ရှေ့နေတစ်ယော...
အချစ်လို့ မထင်တဲ့ အချစ် - အရာရာဟာပြီးဆုံးသွားပြီလား... မသေချာမရေရာတဲ့ မေးခွန်းကြီးတစ်ခုကျွန်မခေါင်းထဲ ၀င်လာမိတယ်...။ အရင်ကသူမရှိလဲဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မ အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ...
Tokyo Disney Sea2(သို့) ဂျပန်ခရီးစဉ် Day4- မေဖလားဝါးရဲ့ သတိပေး တောင်းဆိုချက်အရ ဇန်န၀ါရီလကတည်းက မရေးဖြစ်ပဲ တန်းလန်းဖြစ်နေသည့် ဂျပန်ခရီးစဉ် တိုကျို ဒစ်စနေစီး အပိုင်း (၂)ကို ဆက်လက် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပါမ...
အပျော်သက်သက် - တန်ဖိုးမထားတတ်သူမင်းအတွက်တော့ အပျော်အဖြစ်ချစ်လို့ လွယ်လွယ်လေးဘဲပစ်ရက်တာဘဲ ဘာထူးစမ်းလည်းနော်။ ဒါပေမဲ့... ငါ့ရဲ့အပယ်ခံနှလုံးသားကတေ့ာ မင်းရယ်သံတွေအောက်မှာ အသက်...
တမ်းတမိတဲ့ အာရုံငါးပါးနဲ့ ဘ၀လေးတစ်ခု - အဲဒီတစ်နေ့...................ကျွန်မ လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စထွက်လာခဲ့ ကတည်းက တစ်ခုခု မှားနေသလိုပဲ။ မရင်းနှီးတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ မကျွမ်းဝင်တဲ့ စကားသံေ...
အတ္တလန်တစ် ရှာပုံတော် (၃၅) - ထွက်ခွာစပြုနေပြီဖြစ်သော ဝင်ရိုးစွန်းမုန်တိုင်းကို စက်သေနတ်ဖြင့်နောက်မှ သည်းကြီးမည်းကြီးလိုက်လံပစ်ခတ် နေသော ယူ ၂ဝ၁၅ မှာခွေးရူးတစ်ကောင်နှယ် ဂမူးရှူးတိုးဖြစ်ေ...
အချစ်ဆုံးမို့ ပြောပြချင်ပါတယ်..... - ဒီသီချင်း စာသားလေးတွေခံစားပြီး မြန်မာပြည်တောင်ပြန်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်...တကယ်...
နေရာတိုင်းမှာ မင်းရှိတယ် - ခေါင်းစဉ်အထူးအဆန်းလေးတွေဆို ကြိုက်နှစ်သက်မိတာ ကျွန်တော့ရဲ့ သဘာဝပါ။ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေဆိုရင် ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ စာအုပ်ကို ...
ဆွေးမြည့်သွားသော နှလုံးသား - မင်းအချစ်တွေနဲ့ စတင်ပြီး ၀င်ရောက် လာတုန်းကတော့ လေပြေညှင်း လေးလို့ပေါ့ ငါ့နှလုံးသားထဲ မင်းအချစ်တွေ ပြည့်နှက်နေတော့မှ မင်းကမုန်တိုင်းအဖြစ်ကိုပြောင်းသွား.........
ကြက်သွန်နဲ့ရောနေလို့ အထောင်းခံရတဲ့ငရုတ်သီး - အကြောင်းများစွာကြောင့် နောက်ကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်တွေက off line မှာ ပြန့်နှံ့နေပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အမှားက များပေမယ့် တော်တော်လေး ကြီးကျယ်တဲ့အမှားက...
Remove Administrator Password with CMD ( XP ) - C- Box မှာ Administrator Password ကို CMD ကနေ ဘယ်လို ဖျက်မလဲဆိုတာကို မေးထားလို့ ပြန်ပေးပေးလိုက်တဲ့ပို့စ်ပါ။ CMD က မဟုတ်ပဲ သာမန်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်...
တစ်ခန်းရပ်. - တစ်ယောက်ရင်ထဲတစ်ယောက် ခိုအောင်းခဲ့ပြီးမှ... ရင်ခုန်သံတွေ နားခါးနေပြီပေါ့ ကေသရီ.... များသူစား ဒီလောကမှာ အမှန်မမြင်တော့ဘူးလား.. နေ၀င်ဝင် မ၀င်ဝင်ပေါ့ သူ...
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရာကောင်းကင်ဘုံသို့ - ဟန်ဆောင်အပြုံး လိမ်ညာတွေသုံးလုိ့ နင့်အပြောချိုချိုမှာ ယစ်မှုးမိတဲ့..... ငါ့နှလုံးသားလေး အခုတော့.... ပိုးစားခံရပြီပေါ့။ အချိုကျွေးလွန်းတဲ့....နင်နဲ့ အချိုကြိ...
ခွန်အား တစ်စုံ - ချစ်ခြင်းကို ဖျက်စီးဖို့ မိုးဖြိုချရင်တောင် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…. မင်းရင်ထဲမှာ ငါ.. ငါ့ရင်ထဲမှာ မင်း… ဘေးစကားတွေ ခ၀ါချ ကြားစကားတွေ မီးပုံရှို့ …. ချစ်သူ့အပြုံ...
ဝါသနာဘာဂီ ဆက်တိုင်းမှီ(Tag Post) - ဝါသနာ ဆိုတာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးလို့ ရတဲ့ အရာလို့ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝါသနာဟာ သူကြီးပြင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတေ...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အဓိက ကျင့်စဉ် - ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အဓိက အခြေခံကျင့်စဉ်မှာ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် (မဇ္ဈိမပဋိပဒါ) ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေခံကျင့်စဉ်ကို ဘုရားရှင်သည် ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်၌ ဟောကြားသည့် ပထမဦးဆံ...
သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင် - (၁)ရန်ကုန်မြို့တော်၏ ရပ်ကွပ်တစ်ခုအတွင်းမှ လမ်းသွယ်လေးတစ်ခုတွင် ခေတ်ဆန်ဆန်လူငယ်လေးတစ်ယောက် သည်ကျောပိုးအိတ်လေးလွယ်ကာ တစ်နေရာသို့ဦးတည်နေလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိ...
နှစ်သက်မိသော ဇင် ပုံပြင်များ (၁၁) - Concentration ------------------------------ *After winning several archery contests, the young and rather boastful champion challengedaZen master who w...
ညနဲ့ ငြင်းမိတဲ့ ကဗျာ - ညနဲ့ ငြင်းမိတဲ့ ကဗျာ ဟေ့ ည ... ကဗျာတွေက ... အဝေ့အ၀ိုက် သံစဉ်တွေချို မီးတောက်လို ပူပူနွေးနွေး ဆောင်းနှင်းလိုလည်း အေးရဲ့ ဒါကိုမှ ငါက တရှိုက်မက်မက် .... ။ ...
သုခရှာသော်လည်း ဒုက္ခတွေ့ကြသူများ - လူတွေဟာတကယ်တော့ မိုးလင်းက မိုးချုပ်အလုပ်လုပ်နေကြတာဟာ ချမ်းသာရှာနေကြတာပါ။ရှာရင်းရှာရင်း သုခမရပဲ ဒုက္ခနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပညာတက်တွေသာပြောပါတယ် တကယ်တော့ စဉ်း...
အမ္ဗပါလီ - စာဖတ်သူ တဦးမှ အမ္ဗပါလီအကြောင်း ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေ အန်တီ စီစီချိုသန်း ရေးသား ပို့ပေးထားသော အမ္ဗပါလီ အကြောင်းကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်...
မြင်ကွင်းများ - ကျွန်ုပ်အမိမြန်မာပြည်သို့ပြန်သောအခါ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တောင်ကျော်အလုပ်သမားတို့ ထုံးစံအတိုင်း ကိစ္စအ၀၀ကို ပွဲစားထံဆက်သွယ်ပြီး ယင်း၏စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် နယ်စပ်မဲေ...
my third template - ကျွန်တော် လောလောလတ်လတ် ဆွဲပြီးခဲ့တဲ့ တန်းပလိတ်ကို ပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာတခုလဲဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ တတိယဆွဲခဲ့တဲ့ တန...
ဘ၀ရထား - သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တစ်ခုသောတရားထဲမှာ နာကြားမိတာလေးက ရင်ထဲမှာစွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအရာ က အသွင်မဆန်းပေမယ့် ဘ၀အမြင်မှာ တကယ်ဆန်းစေတဲ့တရားလေးပါ။ ကြား...
Cafe & Note Book
+ တနေ့တာအတွက် ကုသိုလ်၊ ဥစ္စာ နှင့် ပညာ - စာရေးသူတစ်ယောက် အိမ်မှ Busကားဂိတ်ကို စထွက်ကတည်းက ဘုရားမရှိခိုးခဲ့ရတော့ လမ်းတစ်လျှောက် ဘုရားစာကို ရွတ်ဆိုလာခဲ့မိသည်။ စာရေးသူ၏ သူငယ်ချင်းလေးအောင်အောင် ကေ...
အမှတ်တရ တပိုင်းတစ - အရှုပ်တွေလုပ်နေတာကြောင့် အသစ်မတင်ဖြစ်တာ အားလုံးကို တောင်း ရော စကောရော ပန်ပါတယ်နော်...။ ဒီကြားထဲမှာ ဘယ်အိမ်မှလည်း သွားမ လည်ဖြစ်ဘူး။ ခြေချုပ်မိတဲ့ နေ့တွေပေါ့...
သမိုင်းရေးသူများ - အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ် ၃နှစ်သမီး လောက် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ လမ်းကို တောက်တက် တောက်တက် လျှောက်ပြီး အိမ်ထဲမှာ လျှောက်သွားနေတာ။ ကလေးပီပီ လူကြီးတွေ လုပ်သမျှ လိုက်စူးစမ...
အသက်ကြီးပု - ပြာသာပြာ ဖွဲမထွက်ခဲ့ ကြာသာကြာ တစ်ရာမပြည့်ခဲ့... ကွာလတီပဲ ဆိုပြီး ကြာရှည်ဆွဲ ရေးနေခဲ့ (ပြင်ဟယ် ပြင်ဟယ်နဲ့) ထွက်လာတော့လဲ ဒီရုပ် ဒီပဲထည့်တာ ဒီပုတ်... အသက်ကြီး...
+ ချယ်ရီမြေမှ ရင်ပူခဲ့သော ညတစ်ည - အင်တာနက်ဆိုသော ကမ္ဘာရွာကြီးဆီသို့ မရောက်လာခဲ့တာ ရက်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီ။ အပြောင်းအရွှေ့များဖြင့် မြို့နှင့် အလှမ်းဝေးသည် မဆိုသာ၊ နီးသည်ဟုလည်း မမည်သော နေရာလေးတစ်...
I Miss You - Dedicated to: LPWK Software: Adobe Illustrator CS3 Duration: 30mins + Date: 5/07
ရတနာ့သုတ် ပရိတ်တော်ဖြင့် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း - စာရေးမယ် လုပ်ရင်း ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့ ပဲ မရေးဖြစ်တာများနေတယ် အသံတော်တွေကိုတော့ ဆက်ရေးမှာပါ အခုလောလောဆယ်တော့ အခုခေတ်ထလာတဲ့ H1N1 ကမ္ဘာ့လူတုတ်ကွေးရောဂါက အမိမြေကိုတော...
အချစ် = ခလုတ်တိုက်ခြင်း - ဒီနေ့ မောင်နှမလိုခင်နေတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း အချစ်အကြောင်းပြောမိတဲ့အခါ အချစ်ဟာ ဘ၀မဟုတ်ဖူးလို့ ပြောမိရာက ဒီစိတ်ကူးကို ရသွားတယ်။ အစ်ကိုက ကျွန်မက...
Sketch Of Roi (2) - Hand Drawing And Photoshop retouching. Model : Roi Roi post များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်၊အကြံပြု၊လိုလျှင် professionalguiterist@gmail.com သို့ဆက...
မှတ်တမ်း - ဒီနေ့ဆို တစ်နှစ်တစ်လနဲ့တစ်ရက်တောင် ကြာခဲ့ပြီပေါ့။ စစချင်းရေးတုန်းက ဂျပန်မှာ။ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့က စလုံးမှာ။ တစ်နှစ်နဲ့တစ်လလည်း ပြည့်ရော မြန်မာပြည်မှာတဲ့။ တမ...
Scientific Acceptability of Rebirth - ဒီလအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖွဲ့တည်ရာမီဒီယာကနေ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိပေးချင်ပါတယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ဒေါက်တာ ဂရန်ဗီလီ ဓမ္မဝါရ်ဒေနရဲ့ Scientific Acceptab...
Чайка Долли - Чайки, по-моему, - замечательные птицы. Я обожаю чаек. Когда они летят над морем, я не в силах оторвать от них взгляда, у меня замирает дыхание и сами собо...
THE CHANGE - ဘ၀တစ်လျှောက် များပြားလွန်းလှတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်း အမျိုးမျိုးကို လူတိုင်းလိုလို တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းဖူးကြမှာပါ ၊၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်းအပါအ၀င် ပါ၊၊ ပြောင်းလဲ...
အိမ်ပြန်တော့မည် - နှုတ်ဆက်ချိန်တန် အိမ်ပြန်တော့မည်။ မောင်နှမအားလုံး ကျန်းမာပါစေကြောင်း ဦးစွာဆုတောင်း မင်္ဂလာပြုလိုက်ပါတယ်။( လိမ်မာတယ်ဟုတ် ဟီးးး ) ဘလော့လေးနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မ...
ဘလောဂ့်ရေးခြင်းတနှစ်ပြည့်နှင့် ကရင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ အလည်ရောက်ခြင်း အမှတ်တရ - မိမိ နိုင်ငံ၏ သမိုင်း အား ဘတ်ရှု လေ့လာရ စကောင်းမှန်း မသိ သော လူမျိုးသည် အတိတ်က မိမိ ကျူးလွန် ခဲ့ပြီး သော အမှား အယွင်း များကို ထပ်မံ ကျူးလွန်ခြင်း ပြုရန် အတ...
၀ါသနာ - ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ညီမနှင်းဆီနက်ကရေးပေးပါဆိုပြီးတက်ဂ်လာတာက၀ါသနာတဲ့လေ၊၀ါသနာဆိုတာဘ၀ အဆက်ဆက်က ပါလာတာမျိုးဆိုတော့ ဘုရားမှတပါး ဘယ်သူမှမစွန့်နိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျ...
မွေးရပ်မြေနဲ့ရိုးရာဓလေ့များ(၅) - ဒီတခါရေးလိုက်မှာကတော့ ရိုးရာဓလေ့မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလို မိုးရာသီမှာ ကျွန်မတို့မြို့ရဲ့ မိုးရွာသွန်းပုံလေးကို ပြောပြချင်တာ။ ကျွန်မရဲ့ မွေးရပ်မြေလေးဟာ ရှမ်းပြည်...
Life on Mars? Alien skull? - Rock or skull? အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် မှာ သက်ရှိသတ္တ၀ါ တွေ ရှိနိုင် မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အထောက်အကူ ပြောရမှာပါ။ စက်ရုပ်က ရိုက်ပို့ လိုက်တဲ့ မြေမျက်နှာပြင် ပေါ်မှ...
ပူလောင်မှုများမှသည် အေးငြိမ်းမှုဆီသို. - အချိန်မရွေး နေရာမရွေး၊ လူမျိုး ဘာသာမရွေး အမြဲမှန်ကန်နေမည့် သစ္စာလေးပါး သဘာဝတရား အမှန်တရားအား ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်များအပြင် ယခုခေတ် ဥပမာများ သိပ္ပံအမြင်များနှင့်...
ကိလေသာ ၁၀-ပါး - ကိလေသာ ၁၀-ပါး ကိလေသာဟူသည်မှာ သတ္တဝါတို့ကို ညှင်းဆဲနှိပ်စက် ညစ်နွမ်းပင်ပန်းအောင် ပြုလုပ်တတ်သည့် အကုသိုလ် တရားဆိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကိလေသာတရားတို့သည်- ၁)ေ...
ခဏလေးပေမယ့် ကျေးဇူးကမ္ဘာ ပါ .. - - ချွေးစိုလက်နဲ့ အိမ်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်အ၀င်မှာ မှိန်ဖျော့ဖျော့ မီးရောင်ကြောင့် တစ်ခန်းလုံး ပိုလို့ ငြိမ်သက်ပြီး တိတ်ဆိတ်လွန်းတယ် လို့ ခံစားရမ...
Evolution Of Man - Posted in အ၀လွန်ခြင်း Tagged: ပိုစ့်တာ, အ၀လွန်ခြင်း
တနှစ်ပြည့် အလှူတော် - ဓမ္မမိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့… ကျွန်တော်တို့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ အသင်းမှ ဦးဆောင်၍ လစဉ်လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် တစ်နှစ်ပြည့်...
ဒိုမိန်းပြောင်းလဲခြငိး - အောက်ပါဒိုမိန်းသို့ ပြောင်းလဲထားပါသဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ http://www.drwinthein.info ကို နှိပ်၍ ကြည့်ပါ..
ရိုးစင်းသော ဇာတ်လမ်း - စားခွင့်မကြုံတဲ့ ကမ္ဘာဦးပန်းသီးတစ်လုံး အချုပ်အတည်းကြားက မြည်းစမ်းခဲ့ သီတင်းကျွတ်မတိုင်မီညက အရမ်းချိုတယ် အဲဒီတစ်ညပါပဲ နောက်ပိုင်းရက်တွေဟာ ရနံ့ နဲ့ တောင်ဝေးခဲ့...
Myanmar Water Festival 2009 - မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါ… … .. . သူရိယနေမင်းသည် မိဿရာသီဦးသို့ မကြာမီ အချိန်အတွင်း ၀င်ရောက်ကူးပြောင်းပါတော့မည်။ နှစ်ဟောင်းမှ နှစ်သစ်သို့ စတင် ကူးပြောင်းစ ကာလေ...
ကြောင်မှန်းသိဖို့ ကြွက်က သက်သေ။ - ကြောင်မ တစ်ကောင်ဟာ ချောမောလှပတဲ့ လူရွယ်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိလို့ အက်ဖရိုဒိုက်နတ်သမီးဆီမှာ သူ့ကို မိန်းကလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ နတ်သမီးက သူ့ရဲ့...
၀ိပဿနာ သမ္မာဒိဌိ - စာရေးသူရဲ့ blog တွင် ပို့စ် အသစ်များ မတင်ဖြစ်သည့်အတွက် မကြာခဏ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းအား ဦးစွာတောင်းပန်အပ် ပါသည်။ စာရေးသူမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျမ်း...
စုပေါင်းစပ်ပေါင်း သတိတရ တွေ... - ခေါင့်ခေါင့် ပုံတွေကို ဒီလိုလုပ်ပေးထားကြတယ်... ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ( by -SBD)( by -nge)( by -x man)( by zayar)( by zayar)ကိုယ့်ဘာသာမေ့ထားတဲ့မွေးေ...
လက်ရှိအခြေအနေ - သွားရလာရ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ ကြာလှပေါ့... :( ခါတိုင်းလို စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်... သွားချင်တိုင်း သွားမရ ကျော်ရ ခွရနဲ့မို့ အိမ်လည်လည်း သိပ်မ...
ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံ - ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျား… ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားတွေမှာ ဉာဏ်ဓာတ်တွေအပြည့်အဝ ပါနေတယ်ဆိုတာက ဒီလိုခ...
ကျွန်တော်နှင့် ဗီးနပ်စ် - (၁) အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေသည်။ ပြူတင်းပေါက်မှန်ကို လာစင်နေသော မိုးစက်လေးများကို ကြည့်ရင်း သူ့စိတ်တွေ ပျံ့လွင့်နေခဲ့သည်။ မိုးရာသီ……. မိုးရာသီရဲ့ အစမှာ ကျွန်ေ...
ရိုးဂုဏ် - ရိုးသားတယ်ဆိုတာ ချမ်းသာတာ အဆင့်အတန်းရှိတာတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကောက်သော် စားမလောက် ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံ ရိုးသားမှုသည် လောကတွင်အရေးကြီးကြောင်း ကို ညွှန်...
Full version ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါစို့ - Full version ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါစို့ (ဝါ) တရားဖြင့်နေနိုင်အောင် ဖြည့်ကျင့်ကြပါစို့ ”တို့က တရားအားမထုတ်နိုင်သေးဘူးကွ ” လို့ စကားကိုလွှတ်ခနဲပြောတတ်ကြတယ်နော… ဒီ...
နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်... - ဘလော့ဂါညီအကိုမောင်နှမအားလုံးခင်ဗျား… မြန်မာပြည်ကိုအပြီးပြန်ရတော့မှာမို့ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်….။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လာမလည်နိုင်ခဲ့လျှင်သော်လည်းကေ...
စက္ကူငှက်လေး - လေပြည်အ၀င့်မှာ ကြွေလွင့်လာလို့ပေရှပြီး မြေမခရအောင် မြတ်နိုးခြင်းလက်အစုံနဲ့ရင်အုံမှာ ပွေ.ပိုက်မိပါရဲ့ နတ်ဆိုးတွေရဲ့ ကြိမ်စာတစ်ပိုဒ်တဲ့ မိုးတွေပြိုလို ...
ချစ်မေ - မေမေ လောကမှာ ကျွန်မအထင်ကြီးရဆုံး မိန်းမတစ်ယောက်ကို ပြပါဆိုရင် အဲဒိလူဟာကျွန်မရဲ့ မေမေပါဘဲ။ မေက ကျွန်မတို့ ကို ၉လ လွယ် ၁၀လ ဖွား သေမင်းနဲ့ အပြိုင် ရင်ဆိုင်အံတ...
အအေးမိ နှာစေးရောဂါ ကင်ဝေးအောင် - အအေးမိ (အအေးပတ်) တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ မြန်မာ တွေ အတွက် ရင်နှီးပြီးသာပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်း တစ်နှစ် ကို တစ်ခါလောက်တော့ ခံစားဖူးကြပါတယ်။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ...
သမုဒ္ဒရာကြီး (၆) စင်း - ဤလောက၌ သမုဒ္ဒရာ၊ သမုဒ္ဒရာဟု ပြောဆိုလေ့ ရှိကြသည်။ ဤသို့ ပြောဆိုအပ်သော အရာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ၌ သမုဒ္ဒရာ မဟုတ်ပေ။ ကြီးကျယ် များပြားသော ရေအစ ရေအပြင် သာလျှင်...
တော်စတွိုင်းကို အရှက်ရစေသောဝတ္ထု - ဆရာကြီးခင်ဗျား.....ဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၀တ္ထုကြီးဟာ ကမ္ဘာမှာ အရှည်ဆုံးဝတ္ထုကြီးဖြစ်သလို အကောင်းဆုံးဝတ္ထုကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့သ...
mm - mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm
- မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော်၏ဆိုဒ် ဤနေရာသို့ရွှေ့ထားပါသည်။ --->
ပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရစေတနာ ဆိုတာ.. - ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အားလုံးလိုလို ဒါနပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရ စေတနာ ဆိုတာလေးကို ကြားဖူးကြမှာပါ.. ဒါပေမယ့် ဘာကိုဆိုလိုတယ် အဓိပ္ပါယ်ကဘာဆိုတာ...
Dhammaduta Ashin Dr. Pannyissara Official Website
Posted by Sanghaalliance at 6:38 PM